Namuhla sizoxoxa kanjani ukudlala replay wehlelwe. World of Tanks - umdlalo computer elikuvumela ukuba alobe izimpi ezenzeka inthanethi. Khona-ke bangakwazi ukubona.
isixazululo eyisisekelo kuphela
Umbuzo ukuthi nokuzala replays elidala Kumbe, uphakanyiswa ukufunda ukusebenza okuholela echazwe izinto ezingenhla azilona bendabuko isiqophi amafayela. Abakwazi ingabonwa kunoma yiziphi zabama-third party. Ngenxa yale njongo, efanelekayo isofthiwe ejwayelekile kuphela iklayenti yomdlalo.
Ngaphambi sidlule nempikiswano kanjani ukudlala replays ku Kumbe, beqala kudingeka uthole. Ukuze wenze lokhu ohlelweni lokusebenza Lezilungiselelo, ubeke uphawu lokuhlola eduze "Qopha ukulwa" lento. Uma lezi zinyathelo kuyaqedwa, ekupheleni impi ngamunye umdlalo uyosindisa ifayela replay.
Ukuze kulungiswe udaba kanjani ukudlala replay le Kumbe, kudingeka siqale ukubheka lezi zinto. Ngakho-ke, kufanele sikhumbule ukuthi zonke lolu hlobo lwamafayela ku replays lwemibhalo, esemgwaqweni main game ifolda. Ngokuvamile, replay imayelana 800 amakhilobhayithi.
Qhubekisa ngokuthwebula ngqo yokuxazulula le nkinga ukuthi nokuzala replay wehlelwe 0. 8. 10, kanye nezinguqulo nezinye of the game. Khetha into lwemibhalo esishiwo ngenhla. Oku-isidingo ukuvala umdlalo. Qhafaza kabili on ifayela ekhethiwe. Uma lokhu umzamo wokuqala ukudlala, chofoza ifayela ngokushesha, chofoza kwesokudla, futhi kwimenyu eyalandela, ukhethe "Vula nge- ...". Lokhu kuvula ewindini elisha lapho thina ucindezela inkinobho "Dlulisa amehlo". Yenza izinhlelo abonisa ifayela WorldOfTanks.exe. Okulandelayo, cela uhlelo njalo ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza ecacisiwe uhlobo idatha. Ngenxa yale njongo, uphawu into efanele. Lesi senzo ngeke sikwazi ukudlala replays by kabili ngokuchofoza igundane.
Ukuqinisekisa ubuke kalula, ungashintsha phakathi amakhamera. Etulu naphasi imicibisholo ukuvumela ukuba ulungise isivinini sokudlala. Keys "Kwesokunxele" futhi "Kwesokudla" enze kube nokwenzeka ukuba avale kumasegmenti impahla njalo ngemizuzwana 20. Omunye ukusetshenziswa ngokwengeziwe impi ukhiye we-Shift kuskrolelwa kabili njengoba izingcezwana ezinkulu. Isikhala ukuba ume. Lolu cwaningo kusiza ukuhlola replay amaphutha ethu bese ukulungise empini ezayo. Futhi, lesi sisombululo livame ukusetshenziswa abadlali abanolwazi ukunikeza iseluleko Wabasaqalayo. Replays odlalwa kuphela edition wekhasimende, okuye kwalotshwa. Guqula amafayela okunjalo akunakwenzeka.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukudlala replay le Kumbe, kodwa lo mdlalo has eziningi nezinye izici engengaphansi ewusizo khumbula. Okokuqala, sibheka indlela ukudala ifayela. Lo mdlalo, okuyinto manje umbuzo akuyona ngonyaka wokuqala abasebenzisi sibonge. Onjiniyela kuqhutshekwe nokwenza ngcono ukusebenza kanye graphic design amakhono. Esanda kutholakala, ithangi epaki u eyayihambisana imodeli Japanese Te-ke futhi American T23. Njengoba sekushiwo, kungenzeka nokuzala replay isiqophi e umdlalo nganoma isiphi isikhathi, njengoba nje kwenzeka ebholeni imincintiswano. Ngaphansi replays egqanyisiwe ekhethekile lwemibhalo amafayela. Ukuze ubuke le idatha akadingi lutho ngaphandle umdlalo amaklayenti main, kodwa ukubhala empini enjalo? Leli khono olunikezwa onjiniyela, kodwa hhayi ukuyisebenzisa kakhulu wabahlanganyeli phrojekthi. Kuyinto ububende, ngoba ngezinye izikhathi kuyasiza ukubheka ngalé izenzo zabo. Phawula futhi ukuthi laba inhlangano ethile kubahlanganyeli project waqala ukuthatha ukuma muva nje, okuyinto ngokuqhubekayo benana replays usebenzisa platform okhethekile ebonakalayo. Amarekhodi kukhona izimpi ezibalulekile ngesikhathi patch sokuhlola.
Inganekwane yokuqala ngalolu hlobo amafayela siye kungaqedwa kakade, efakazela ukuthi replays zihluke kakhulu movie evamile futhi ngenxa yalokho akudingeki for ukubekwa yabo izindodla inkumbulo. Lezi izinto kukhona amathangi ukuqopha izenzo. Ngakho, umthamo ukulwa egcinwe ingeqi 1 MB. Uma ufuna ukugcina izimpi 1000, ngoba ayebonakala igigabhaythi omunye sediski. Ukubhala ukulwa oyifunayo ukuya iklayenti yomdlalo, saqala "Izilungiselelo" futhi baphendukele option ezifanele ngokukhetha inketho oyifunayo. Kuzoqalwa nge-version 0.8.7 yomdlalo, singakhetha phakathi kulondolozwe konke ukufana noma nje elokugcina. "Sebenzisa" inkinobho kuqinisekisa ukuqhubeka nemingcele. Bese uchofoza "OK". Ngenxa yalokho wemeshi ngayinye abayosindiswa ifayela lalo. Ukuze ekwelapheni impahla kokudabula Sekuvele kufakazelwe bese uvula ifolda ne umdlalo. Chofoza lwemibhalo replays. Uyivule. Lokhu lwemibhalo iqukethe wonke amafayela agcinwe izimpi. Ukuhlola isikhathi zempi igama lento, ibalazwe futhi ithangi.
Ngakho esiphethweni kanjani ukudlala wehlelwe replay nokuqopha ke.
Abalingisi, "oMdala": labo ababedlala Klaus, u-Eliya no-Rebecca
Indlela yokwenza pancake nge kefir aluhlaza? pancake Fluffy: iresiphi
Bangaki imigomo ye- "Zenith" kukora Oleg Shatov?